August 2017 – dulmidiid
Ciidamada Jubaland oo maanta howlgallo ka wada deegaanka Miidow oo ay shalay qabsadeen
Ciidamada Maamulka Jubaland ee Soomaaliya ayaa maanta howlgallo xooggan ka wada deegaanka Miidow ee Gobolka Jubbadda Hoose. Deegaanka Miidow, ayaa shalay waxaa la wareegay ciidamada Jubaland kaddib markii Al Shabaab ay isaga bexeen. Dagaalyahannada Al Shabaab ayaa ku sugan daafaha
Golaha ammaanka ee QM oo waqtiga u kordhiyay Xilli-Hawleedka howlgalka Midowga Africa ee AMISOM
15-ka Xubnood ee Golaha Ammaanka ee QM ayaa xalay isku raacay in muddo 1-sanno ah lagu kordhiyo Hawlgalka Midowga Africa AMISOM ee ka socda dalka Soomaaliya. Xilli-hawleedka ciidamada AMISOM, ayaa waxaa uu ku ekaan doonaa bisha May 31-da ee sannadka
CIid Wanaagsan Ciid wanaagsan Ciidwanaagsan “Maamulka ,Shaqaaaha iyo dhamaan howlwadeenadeena Wesbsedka dulmidiid.net”
Ka:Maamulka ,Shaqaaaha iyo dhamaan howlwadeenadeena Wesbsedka dulmidiid.net Ku: Akhristayaasha Websedka dulmidiid.net CIid Wanaagsan Ciid wanaagsan Ciidwanaagsan. Dhamaan Umada Muslimiinta ah iyo kuwa Soomaaliyeed meelkasta oo ay ku sugan yihiin waxaan halkan ugaga direynaa hambalyo ku aadan ciidana Arafo oo
Kulan wariyaasha ay su’aallo ku weydiinayeen Xukuumadda oo xalay lagu qabtay Muqdishu
Kulan loogu magac daray “Maqal Dadkaaga”, oo uu soo qaban-qaabiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay lagu qabtay Magaalladda Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa wariyaasha ay su’aallo ku weydiinayeen qaar kamid ah golaha Wasiiradda ee Xukuumadda
Ugu yaraan 25 ruux oo saarnaa gaari nooca xamuulka qaada ah ayaa ku dhaawacantay kadib gaarigii ay saarnaayeen uu ku rogmaday meel u jirta3km magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle. Gaarigan ayaa ka yimid degmada Aadan Yabaal waxana uu ku
Ra’iisal wasaare Kheyrre oo maanta soo xiraya Shirka Qaxootiga Soomaalida ee Ka socda Muqdisho.
Xasan Cali kheyrre ra’iisal Wasaarada Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta uu soo xiro shirka mudada saddexda maalmood ka socda Magaalada Muqdisho Kaas oo looga hadlaayay sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa qaxootiga Soomaalida ee dib usoo laabanaya. Shirka
DEG DEG: Xukuumada Soomaaliya oo ku dhawaaqday go’aan si weyn u farxad galinayo Shaqaalaha Dowlada-maxaa cusub? Akhriso
Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Dowladda Federalka Somaliya ayaa sheegtay Shaqaalaha Dowladda inay fasax yihiin muddo laba cisho ah oo ka bilaabanaysa maalinta Sabtida. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Xukuumadda Somaliya ayaa lagu wargeliyay Hay’addaha Dowladda in dhamaan
Xiisad dagaal oo ka taagan Xeraale iyo Ahlsuna oo ciidamo fara badan u dirtay
Wararka ka imaanaya deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inay ka jirto xiisad dagaal oo u dhaxeysa maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwa Ahlusuna, kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay gacan ku heynta deegaanka. Dhaq dhaqaaqyo ciidan oo iska
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo digay Waqooyiga Kuuriya,
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa digniin u diray Waqooyiga Kuuriya, kaddib markii maalin ka hor ay tijaabiyeen gantaal qal qal geliyay dalka Japan. Kulan deg deg ah oo Golaha Ammaanka ay yeesheen ayaa waxay si cad uga soo horjeesteen
Vidio&Sawir:Maxamed C/laahi Maxmed Farmaajo oo Kubad kucayaarayo Xeebta liido iyadoo gudaha Magaalada Mogdishu-yalaan Meydad gaaraya 10-wererkii Bariire .
Wax lala yaabo ma ahan in hoggaamiyaasha maamullada ay damashaad u tagaan xeebaha ama dalalka dariska ah iyadoo ay yalaan Maydadkii bariire waxaa xeebta liido kubada kucayaarayay Madax’weynaha jamuuriyada Max’ed C/laahi Farmaajo. ehelada Marxuumiinta dhinta ayaa halkudhi kadhigta aasimeyno iyadoon